विधान महाधिवेशनमा किन पेश भएन घनश्याम भुसालको भिन्न मत ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
विधान महाधिवेशनमा किन पेश भएन घनश्याम भुसालको भिन्न मत ? यस्तो छ कारण
काठमाडाैं । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले असोज ३ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ‘समृद्धि र समाजवादको हाम्रो बाटो’ शिर्षकमा ८ पेज लामो टिप्पणी पेश गरे। एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै भिन्न मत पेश गर्नलाई उनले फरक प्रस्ताव राखेका थिए।
ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटी हुँदै विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्यो। संशोधनसहित आइताबार पारित भएको छ। तर भुसालको भिन्न प्रस्ताव भने विधान महाधिवेशनमा पेश नै हुन पाएन। आफूले राखेको भिन्न मतमाथि अध्ययन गर्दै जाने र महाधिवेशनमा समेत पेश गर्न सकिने भनेर थाति राखेको भुसालले बताए।
‘स्थायी कमिटीमा मैले पार्टीको कार्यक्रमको ढाँचा र पार्टीमा भएका मामलाहरुमा समेत विस्तृतमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर भिन्न मत पेश गरेको थिएँ, स्थायी कमिटीको बैठकमा यो विषयमा फेरि छलफल चलाउँदै जाने भन्ने सहमति भयो’ उनले भने, ‘अध्ययनको कुरालाई खुला राखिएको छ। विभाजनमा हामी धेरै जिम्मेवार छौँ, सबैभन्दा बढी ओलीजी हुनुहुन्छ भनेर मैले प्रष्ट राखेको थिएँ।’
भुसालले संसद विघटन गलत थियो, विघटन गरेपछि नै कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएको र सरकारबाट खसाल्ने काम भएको समेत आफ्नो भिन्न मतमा उल्लेख गरेका थिए।
भुसालको भिन्न मतमाथि छलफल गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्षहरु भीम रावल, युवराज ज्ञवाली लगायतले समेत धारणा राखेका थिए। तर आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा तत्काल बहुमत हुने नदेखेपछि भुसाल पछि हटेका हुन्।
‘यो विषयलाई अहिले सकेसम्म भिन्न मतका रुपमा वहसमा नलैजाउँ भन्ने कुरा गरियो। अध्ययन गर्दै जाने भन्ने भयो। अहिले नै अरु सहमत नभइकन पारित हुँदैन’ उनले भने, ‘अहिले पार्टीमा बहुमतले त्यो कुरालाई नबुझेको र समर्थन नगरेको हुनाले आउने महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनेर भिन्न मत पेश गरिएन। स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर हामी सहमतिमा पुगेको हो।’
यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू बाँचिरहेकाले विरोधीहरूलाई चिन्तित बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। एमाले विधान महाधिवेशनको समापन सम्बोधन गर्दै ओलीले आलोचकहरु आफू बाँचेकैले चिन्तित भएको बताएका हुन्।